Archive du 20200131
Governemanta Ho kitsapatsapa isan-kerintaona ve ?
Raha nametraka ireo mpikamban’ny governemanta ny filoha Andry Rajoelina ny 24 janoary 2019 dia naneho ny hisiana tombana afaka herintaona hahitana izay nahomby sy tsy namely. Tonga ny herintaona,
Fitakiana ireo Nosy Malagasy Miandry ny daty manaraka hifampidinihana ny rehetra
Hanohy ny paikady rehetra ahafahana mamerina ny nosy Malagasy ao amin`ny ranomasimbe indianina ny minisitry ny raharaham-bahiny vaovao, Tehindrazanarivelo Jacob.
Kitoatoam-pitantanana Hitory any amin’ny Tribonaly Iraisam-pirenena ny “Monde, Justice”
Nijoro ara-pomba ofisialy eto Madagasikara omaly ny Firaisamonim-pirenena”Monde, Justice”, raha toa ka efa hatry ny ela ny any Frantsa, Bruxelles, Amerika, Canada, La Réunion …
Edito Mitady mangarahara hatrany !
Miampy indray ny fanontaniana. Tsy mijanona intsony amin’ny “contrat programme”
Ady amin’ny Coronavirus Herinandro no hananganan’ny Sinoa hopitaly goavana
Mihazakazaka ny fanamboarana ilay hopitaly lehibe any Wuhan – Chine natokana handraisana sy hitsaboana ireo mararin’ny coronavirus.
Fanampiana ireo faritra traboina I Inde no voalohany nanohina ny antso
Efa any Antsiranana ny sambo indiana mitondra ireo fanampiana ho an’ireo faritra tena voa mafy tamin’ireny andro ratsy ireny, hoy ny nambaran’ny Ambasadaoron’i Inde, Abhay Kumar tetsy Tsaralàlana omaly.
Angovo azo avy amin’ny masoandro Efa azo jifaina amin’ny finday
Nampahafantarina omaly tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny foiben’ny orinasa Telma etsy Analakely ny vokatra vaovaon’ity
Mariazin'ny samy ngeza Misy minisitra hanambady diplaomaty…
Amin’ny 14 febroary izao no hatao ny mariazina minisitra iray sy diplaomaty vazaha iray, raha ny tsiliam-baovao.
Fandaminana vaovao Hisy tsena ao amin’ny farihin’Anosy
Nanapa-kevitra ny mpitantana eo amin'ny tanànan'Antananarivo fa hafindra etsy amin'ny zaridaina ireo mpivarotra isaky ny alakamisy voakasiky ny fanamboarana ny kianjan'i Mahamasina.
Kaominina Ivato Miasa mafy manala fako ny Ben’ny tanàna
Vao valo andro monja izao no nipetrahan’ny Ben’ny tanana Penjy Randrianarisoa eo amin’ny toerany dia efa tsy mijanona manala ireo fako mivangongo ao amin’ny tanànan’Ivato izy sy ireo mpiara-miasa aminy.
Fiarovana amin’ny fidiran’ny Coronavirus Naato ny zotra Antananarivo-Gouangzhou
Noho ny fivoaran’ilay areti-mandoza Coronavirus any Chine sy handraisana fepetra amin’ny fiaroavana izany tsy hiditra eto
Fahapotehan’ny ala sy fitrandrahana tsy ara-dalàna Zava-manan’aina miisa 2.591 no ahiana ho lany tamingana
Zava-manan’aina miisa 2.591 hita eto Madagasikara no ahiana ho lany tamingana. Izany no voalazan’ny voka-pikarohana momba ny lisitra mena mitanisa an’ireo harena voajanahary tandindomin-doza aty Afrika.
Ambohidratrimo sy Talatamaty Mirongatra ny hala-botry
Mirongatra ny hala-botry eny an-tsaha amin’ny faritra Talatamaty sy Ambohidratrimo, indrindra ny « légume ».
Tsena sy voka-pifidianana Misavoritaka tanteraka ny mponina ao Moramanga
Ao ny mitokona, ao ny manorina tsena hazo amin’ilay tsena manara-penitra, ao ny manangana tsena amoron-dalana sy anaty arabe etsy sy eroa.
Resaka varotra olona tany Arivonimamo Lehilahy roa no saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Nitrangana toe-javatra hafahafa tany amin’ny fokontany Mangatany, kaominina Arivonimamo, distrikan’Arivonimamo, omaly alakamisy 30 janoary..